Offshore Account Setup - Zvaunofanira Kuita
Nhanho yekutanga yekumisa yako offshore bank account ndeyekukurukura zvaunoda nenyanzvi ine ruzivo. Unogona kuita izvi kuburikidza nefoni kana online. Kunyanya, iwe unogona kushandisa iyo nhamba kana fomu iri peji pane kutaurirana zvakananga nemupi wezano.
Saka nekudaro, tinokwanisa kuvhara ruzivo rwamunofanirwa kupa kumisikidza bank account munzvimbo dzinozivikanwa. Chikwata chedu chevashandi chinogona kupa rutsigiro pakuvhura bank account nyowani inenge chero nyika.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mazhinji emakungwa emahombekombe achazoda anounza anokwanisa. Iyeye munhu anga atove nehukama ne bank. Neraki, iri sangano iri sumo yakakodzera kumasangano mazhinji emari pasi rese.
Akaundi yekubhengi yekune dzimwe nyika inoreva kubhengi account mune iyo saina iyo saina kana muakaunzi weakaunti asiri mugari kana mugari. Isu tinowanzoreva kune idzi nzvimbo sekubhangi nzvimbo dzemahara nekuda kwekumanikidza kwazvo kwekuchengetedzeka kwevatengi. Paunovhura account yekubhangi rekunze mune imwe yematunhu ekunze ekunze, unowana kukosha kwekuvanzika kwemari.
Saka, iwe unowedzera sei kuvanzika? Muchidimbu, vatengi vedu vanowanzo vhura maakaunti avo matsva muzita remakambani eakazvimiririra emahombekombe atinogadza. Zvikonzero zvekutanga kuvhura maaccount ebhengi ekunze ndeyekuvanzika uye kuchengetedza kwemidziyo. Kune mamwe mabhenefiti akadai sekuronga dzimba pamwe nekudyara nedzimwe nyika pamwe nebhizinesi. Aya mabhenefiti anowanzoda chakakodzera pamutemo chishandiso chakadai senge offshore LLC. Iyo inonyanya kufarirwa uye inobatsira kune avo vanotsvaga kuvanzika uye kuchengetedzwa kwemidziyo ndiyo Nevis LLC.
Nzira Yokuzarura Nayo Account Bank
Mabhangi ekunze ane zvimwe zvakafanana zvinodiwa paakavhura maakaundi. Mabhangi anoita izvi kuitira kutevedzera nyika dzepasi rose. Izvi zvinosanganisira ruzivo nezvewe, chitupa uye chekutanga dhipoziti. Zvichienderana nesangano rako rezvemari, bhangi rinogona kukumbira iwe makopi epasipoti yako, mareferensi uye humbowo hwekugara. Isu tinokwanisa kuvhura musuwo kumabhangi epasi akasimba epasi. Nekuda kwechiitiko chakakura uye hupenyu hurefu mumunda, isu takakodzera sumo kune mazhinji emabhangi makuru eSwitzerland uye akasimba.
Kutanga, iwe unoumba kambani yekune dzimwe nyika. Zvadaro, iwe unovhura iyo bank account muzita rebhizinesi. Izvi zvinovhura account yako yekubhangi iri muzita rekambani yakazvimiririra yekumahombekombe pane zita rako chairo. Paunenge uine zvinhu muzita rako zvakananga, iwo ari nyore kutarisana nematare.
Mukuwedzera, iwe unogona kuwana yakavanzika yemari kana iwe ukashandisa masimba maviri ekunze. Iwe unoumba kambani yako mune imwe nyika. Wobva wavhura account yako yebhangi mune imwe. Chaizvoizvo, iwe uri kutora mukana miviri yakavanzika yenyika yekuvanzika. Mukutonga kwakanaka kwebhangi kwemhiri, imhosva huru kupa ruzivo rwevatengi account kune vamwe. Mune mamwe matongo zvakare imhosva kuti mumwe munhu ape ruzivo nezvezi muridzi wekambani yako. Iyo kambani kuwedzera bhangi account account ndiyo imwe nzira inokurumidza yekuchengetedza hupfumi hwako kubva kumeso ekuona. Kuti uwane rumwe ruzivo, verenga, Offshore Banking Yakatanga Inotungamira, kwaunoona ruzivo rwekutanga kubhangi rekune dzimwe nyika.
Iyo Financial Services Commission (FSC) kana mubato wakaenzana munyika iyoyo kana dunhu rinotonga rimwe nerimwe bhangi. Pasi rese, Sangano reUkudyidzana Kwehupfumi uye Budiriro (OECD), European Union, nemamwe masangano, vanopa kurudziro uye zvinodiwa. Ivo vari munzvimbo iyo dzakasiyana-siyana FSCs yekumanikidza uye mabhangi ekutevera.
Chikonzero chikuru cheiyi mirairo ndechekuchengeta mutemo inogara vagari mukati uye matsotsi kunze kwemari system. Ndokusaka paine zvinodikanwa zvakadzama zvekubatsira kuregedza mari kana zvimwe zvisiri pamutemo.
Hezvino zvimwe zvinhu zvakajairika zvinowanzodiwa kana uchifunga offshore banking. Iyo bhangi inodaidza ruzivo urwu "nekushingairira" kana kusangana ne "Ziva Mutengi Wako" kana KYC zvinodiwa.
Heino muenzaniso wezvimwe zvinhu izvo zvinodikanwa na mutemo.
1. Bhokisi rekushandisa kwebhangi.
2. Chiratidzo chekadhi
3. Notarized kopi yepasipoti
4. Uchapupu hwekero, yakadai sekubhadhara mari
5. Bhuku Rekufuratira Tsamba kubva kubhangi uyo munhu akakodzera ave neukama hwebhangi naye kwemakore maviri
6. Professional References Letter kubva kuMubhidhiyo / Gweta ane munhu akakodzera ave neukama hwehutano naye kwemakore maviri
Izvi hazvireve kuti inyonganiso inoshanda. Iyo FSC uye OECD uye iyo bhangi, iyo pachayo, inogona kunge iwedzere zvinodiwa. Zvekare, izvi zvese zvinorehwa kuchengetedza kutendeseka uye huchokwadi hwenhoroondo yebhangi uye kubatsira kudzivirira kuparwa kwemhosva. Vakuru vebhangi vanonyatso tarisisa magwaro uye vanokata runhare kuti vaitei iwe uchipa mareferensi anoshanda.
Semuenzaniso, ivo vachazoda kuverengera pekugara chaiko. Nekudaro, iwe unoda imwe mhando yeuchapupu, seyese yekushandisa bumbiro muzita rako. Zvichienderana nemhando yegwaro chero ripi zvaro, notarization inogona kuratidza kuti inofanirwa. Dzimwe nyika dzinogona zvakare kuda mafomu akawanda ekuzivikanwa asati avhura account.
Paunovhura account yekubhanga kwemhiri, unogona kuhaya nyanzvi kuti ikubatsire kuzviita. Sangano redu, semuenzaniso, rinopa sevhisi iyi. Zvikasadaro, iwe ungazofanirwa kutsvagisisa izvo chaizvo zvinodiwa izvo kutonga kwese kana bhangi Quora inofungidzira nezve 14,600 bhanga munyika. Nekudaro, kunze kwekunge iwe uine nguva yakawanda uri pamaoko ako, vazhinji vangabvuma kuti zvakanaka kuti uwane rubatsiro.
References uye Zvinyorwa
Kana dziri mareferenzi ebhengi, bhanga rekunze rinogona kuda humbowo hwehukama huripo pakati pako nebhangi rako. Inogona kuda ruzivo rwakadai semazuva ese zviyero. Muzviitiko zvakawanda, mwedzi mitanhatu kusvika pagore yakakosha yekutaura kwebhangi inofanira kukwana. Yako bhangi remumba rinokwanisawo kupa tsamba yekutaura ichisimbisa kuti uri mutengi mukumira kwakanaka.
Iyo yekumahombekombe bhangi inogona zvakare kuda ruzivo nezvechimiro uye mhando yezvinhu zvaucharonga kufambisa. Mabhanga anga ari pasi pekumanikidza kumisa kubhadharo kwemari uye zvimwe zvisiri basa. Naizvozvo, izvi zvinyorwa zvekuwedzera zvinokumbirwa kuitira kuti sisitimu iyi igone kucherechedza emari mune account. Kana vakasadaro, vanogona kutambura faindi kana kurasikirwa rezinesi ravo rebhangi. Saka, usatarisira kuti ivo vachakugadzirira wakasarudzika.
Iko Chirungu chiri mutauro unonyanya kushandiswa munyika iyo yaunoronga kuzarura bhangi yako yebhangi yekunze? Kana zvikasadaro, iwe unogona kugovera shanduro dzakagadziriswa dzemagwaro ako mumutauro wepamutemo.
Sezvauri kuona, iyo yekumahombekombe bank account setup maitiro yakasiyana pane yekuvhura account account. Mabhangi mazhinji anoda kuti iwe uratidze mumunhu. Neraki, isu tinoziva izvo zvisingadaro. Vaya vasingade kufamba, vachada mamwe magwaro ekuratidza kuti ndiwe waunoti uripi. Izvi zvinokubatsira. Izvi zvinodaro nekuti kana waratidza kukumbira mari yako, unoziva kuti uchaenda kwauri chete; kwete mumwe munhu wavanoti ndiwe. Saka, nekupa yakakodzera ID kumusoro, iwe nebhangi uchaziva kuti zvechokwadi ndiwe.
Sezvo maitiro akasiyana nebhangi uye nyika, zvakakosha kujekesa zvimwe nyaya musati mavhura account. Iwe unoda kuziva kuti kune zvipi zvinorambidzwa pakuendesa mari yakawanda yemari. Nokudaro, iwe unoda kuziva nezve nzira dzekugonesa kwakadaro. Iwewo uchada kuziva kana bhaji rebhandi rebhangi richashanda munyika yose. Inoshanda here zvose zvekutengesa zvekutengesa uye muATM? Tsvaga kana iwe ukakwanisa kushandisa kadhi yebhengi kuti ubhadhara zvinhu zvepaIndaneti nemasevisi.
Mari yemubhadharo inopihwa nemabhangi ekuMahombekombe dzimwe nguva yakakwira kudarika iya inopiwa nemabhangi eUS. Iyo miripo yezvigaro inogona zvakare kuve yakakwira zvishoma. Chikamu chekuita nekushingaira kwakafanira chiri kutarisa mari dzese dzinobhadharwa nebhangi. Kana iwe usingaronge kuita akawanda ekuchinjiswa, mubhadharo ungasaita mutsauko wakawanda; asi ivo vanogona kuwedzera kumusoro neakanyanya basa kubhengi account.
Kamwe Inguva Yenyu Yakazarurwa
Pane imwe nguva sangano rakagadzirisa iwe offshore bank account setup magwaro, ivo vanowanzo kutumira iyo kusimbiswa kwauri kuburikidza neemail. Panguva iyoyo iyo bhengi ichamirira kutumirwa kwe waya. Kana vangogamuchira dhipoziti yekutanga ivo vanozomuisa yako itsva account. Zvimwe zvinoshandiswa zvinosanganisira mubhadharo wekuvhura, makadhi ebhengi akawedzerwa (kana achinge achishanda), machira uye zvimwe zvinodiwa. Zvekare, izvi zvichasiyana pakati pevashandi vekubhangi rekune dzimwe nyika.
Kamwe iyo bhengi account iri kushanda, iwe unowanzo gamuchira online kuwana kuti ugadzire yako account uye password. Iwe unogona zvakare kugamuchira zvinhu zvakadai sechinhu chiri nyore-kushandisa-signature dhizaina. Paunoriwana, iwe unogona kuona yedhijitari inogadzira kodhi yakachengeteka yekuwana yako account account. Nemabhangi mazhinji, iwe uchagona kuita zviitiko nekukurumidza, nyore, zvakavanzika uye zvakachengeteka. Nekudaro, kushanda account yako uye kushandisa online kuwana kunoenderana chaizvo nekushandisa bank pasi pemugwagwa.
Rubatsiro ruri Pano
OffshoreCompany.com yabatsira zviuru zvevanhu pasi rese kuseta offshore bank account. Mukuwedzera, isu tinobatsira kutanga zvakavanzika stock brokerge account. Zvakare, iyi sangano ndeimwe yemakambani anotungamira anopa zvirongwa zvekudzivirira asset. Nekudaro, isu tiri mupi anovimbika mupei ane hukama neakakodzera mhenderekedzo yekutonga. Kana iwe uchishuvira kutora chikamu mubhangi rekunze, ita shuwa uzive pachako kuti uite sarudzo chaiyo. Ndozvatinogona kukubatsira kuti uite.
Bhuku Rekune Bhengi Inobatsira
Mamwe mabhanga ekunze anogara achipa zvirinani mubereko izvo US nemabhangi eCanada. Uyezve yakawanda inopa yakachengetedzwa account account services. Kuwedzera kuvanzika kunobatsira. Imwe mukana mukana wekudyara kwakanaka ekunze. Kuwedzera account yekubhengi yekune dzimwe nyika pamwe neaseti yekudzivirira inzira yakanaka yekuzvidzivirira pamari. Kana iwe uchingova neaccount account muzita rako chairo, hauna kuchengetedzwa. Ndokunge, mutongi wemunzvimbo anogona kukurayira kuti uvhure mari yacho. Kubata account yako mu offshore LLC kana asset dziviriro trust, zvisinei, inotendeutsa matafura. Kuita izvi kunogona kudzivirira gweta remupikisi wako kupamba mari yako.
Overseas Banking, iyo Pazasi Line
An Overseas Bank Account inongoreva, kubhengi neinisangano yemari yakavakirwa mune imwe nyika isiri yako. Kubhengi mhiri kwemakungwa kwevanhu vekuAmerica kazhinji kunoreva kwakachengeteka uye kwakakurumbira mari yekutandarira. Aya mahwindo anosanganisira Switzerland, iyo Cayman Islands, Belize neLuxembourg. Naizvozvo.
Sezvatareva, kushandisa bank account kunze kwenyika kwakafanana nekushandisa yako yekumba account. Ndokunge, mhiri kwemhiri kwemabhangi ari nyore kuwanikwa kuburikidza neATM michina uye online account management.
Overseas Bank Maakaundi nenyika akachengeteka uye akasimba emari masangano. Shandisa iyo imwe yenhamba dzefoni kana yakazara fomu yekubvunza pane ino peji kuti uwane rumwe ruzivo.
Makomborero eBanisheta kumadokero
Kuvandudza Asset Kudzivirira kubva kuLawsuits
Inozarura Door kuti Inakidze Offshore Investments
Heino imwe yakakura tip ruchakubatsira iwe kuwedzera mari kuvanzika uye kuchengetedza kwemidziyo. Ndokunge, svinura kambani yebhangi yepamhenderekedzo yekumahombekombe muzita rekambani yekunze. Izvi zvinopa zvakavanzika zvikuru zvemari kuvanzika. Kune nzira dzinoverengeka dzekuwedzera zvakavanzika zvako nekuchengetedza pfuma yako. Ingobatanidza maakaundi emhiri kubhengi, makambani uye matrasti. Semuenzaniso, iyo Nevis LLC mitemo inopa iyo yakasimba yekudzivirira kweasset chero ipi zvayo mune mafungiro edu. Zvakare, mutemo wedare unonongedzera kuCook Islands Trust seyakanyatso shandisa aseti yekudzivirira asset yemhando ipi neipi.
Sezvo iwe uchiziva, kuchengetedza hupfumi hwako uye kuvanzika kwemari hakuna kumbove kwakanyanya kukosha. Neraki, iwe unogona kunakidzwa kwakazara nekuvanzika uye asset ekudzivirira mota munzvimbo dzakachengeteka zvakanyanya pamhenderekedzo. Vanotipa seni vanogadzira zviuru zvemakambani emakungwa uye anovimba nevatengi vavo zuva rega rega. Varidzi vawo vatsva, vanoisa mamirioni emadhora mumabhangi ekunze ekunze gore rega. Semugadziri akakodzera wemabhangi akasimba eSwitzerland, sangano iri rakabatsira zviuru zvevamwe nemabhangi ekunze. Ndokunge, iri sangano rinovabatsira kuvhura account yekubhanga kwemhiri kwemakungwa. Saka nekudaro, iwe unokwanisa kuvazarura neakadzika ekutanga deposits kana nyanzvi ine ruzivo inotungamira nzira.
The IRS mutero vanhu veUS pamari yepasi rose. Nekudaro, ita shuwa iwe utsvage kutungamirirwa neCPA uyo anogona kukupa zano rakanaka remutero. Uri kutsvaga nzira yepamutemo yekuchengetedza midziyo? Iwe uri kushanda mune yakasarudzika uye zviri pamutemo kuwirirana fashoni? Kana zvirizvo, inzwa wakasununguka kushandisa nhamba kana fomu rakapihwa pane ino peji.
Zvinangwa zvemutemo chete
Izvi zviri pamusoro zvinotaurwa pamwe nekunzwisisa kuti kambani uye kubhengi account inoshandiswa chete nekuda kwemutemo. Kazhinji, vanhu vemuUS vano mutero pamari yepasi rose. Saka, kuchengetedzwa kwemidziyo kubva kumarara, vexatious litigants inogamuchirika mune dzakawanda zviitiko. Nekudaro, kubvisa mutero kana kushandisa iyo iri pamusoro kudzivirira mari yakawanikwa zvisiri pamutemo hachisi chinangwa chechinyorwa chino. Nekudaro, isu tinofunga iwe uri mugari anoteerera mutemo ane hunhu hwechinangwa. Kana hongu, kushandisa masevhisi ari pamusoro apa kunogona kupa mari yekuvanzika uye kuchengetedzwa kwemidziyo yauri kutsvaga.
To chitsauko 9>